Tonga iyo Fiji oo ku dhuftay 6.9 dhulgariir xooggan |
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Newsletter » Tonga iyo Fiji ayaa ku dhuftay dhulgariir xooggan oo gaaraya 6.9
Tonga iyo Fiji ayaa ku dhuftay dhulgariir xooggan oo gaaraya 6.9
Dhulgariir xooggan oo 6.9 ah oo u dhow Fiji iyo Tonga ma uusan sababin tsunami, sida laga soo xigtay USGS. Dhulgariirka ayaa dhacay abaare 6:57 subaxnimo xiliga maxaliga ah ee subaxnimadii Sabtida.
Labada jasiiradood ayaa ah meelaha ugu waaweyn ee safarka iyo dalxiiska ee Koonfurta Badweynta Baasifigga.
Ma jiraan wax war ah oo ku saabsan khasaaraha iyo dhaawaca.
Dhul-gariirkii Badweynta Baasifigga wuxuu ku yaal:
42km (88mi) NE ee Jasiiradda Ndoi, Fiji
315km (196mi) WNW ee Nuku`alofa, Tonga
431km (268mi) ESE ee Suva, Fiji
468km (291mi) SE ee Lambasa, Fiji
545km (339mi) ESE ee Nadi, Fiji
Qayb cusub oo daaweynta Ebola ayaa laga furay Monrovia, Liberia
Seychelles waxay u socotaa Suuqa Socdaalka Adduunka (WTM) ee London